Uyakha njani kwaye uyiJonge njani i-Instagram yakho yokuKhuthaza okanye iPhulo | Martech Zone
Uyakha njani kwaye uyiKhangele kwiNgcaciso yakho ye-Instagram okanye iphulo
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 17, 2015 NgoMgqibelo, nge-4 kaFebruwari ngo-2017 Douglas Karr
Silungiselela unyaka wethu wesibini Umnyhadala woMculo + weTekhnoloji kwaye i-Instagram yenye yeendawo esikhuthaza umcimbi. Andikholelwa ukuba senza umsebenzi olungileyo kwi-Instagram njengoko besinokwenza, nangona kunjalo, bendonwabile ukubona abantu kwi-ShortStack bepapasha le infographic ngendlela yokwakha kunye nokulinganisa impendulo yakho Ukunyuswa kwe-Instagram okanye iiPhulo.
Ngelixa ii-brand ziqale ukusebenzisa i-Instagram umceli mngeni ibikukuba iimveliso zisebenzisa iiprofayili zabo ze-Instagram ukukhuthaza umxholo, kodwa banikwa ikhonkco elinye lokusebenzisana. Isithintelo sithetha uninzi lweempawu ezihlaziya i-URL kwi-bio yazo ngamaxesha ngamanye amaxesha yonke imihla. Le infographic ibonelela ngesisombululo.
Nge-ShortStack, iimveliso ziyakwazi ukwenza ii-Instagram Campaign ezinokubamba zonke iintlobo zomxholo kubandakanya iifom, iividiyo kunye nokunye. Endaweni yokuyalela abasebenzisi be-Instagram kwi-URL esebenza injongo enye, yenza ikhonkco elinye livunyelwe kwi-Instagram bio yakho ngokubala ngokubalathisa Iphulo elinamandla le-Instagram.
Amaphulo anezinto ezininzi eziluncedo- kubandakanya nokulula ukungena kumakhonkco okulandela umkhondo, iziphumo ezinokulinganiswa, ukwenziwa kwefowuni, ukucwangciswa, akukho londolozo kunye nokulula kunye nomakhi wephulo we-ShortStack.
tags: Iphulo le-instagramUkunyuswa kwe-instagram
Ubungqina beQQ: Ubungqina be-Intanethi kunye nokuZenzekelayo kokuSebenza